China Logistics Division vagadziri uye vanotengesa | KAIHUA
Solution uye chakuvhuvhu kugadzira for dustbin, nhovo, crate etc.Mazhinji maumbirwo anotumirwa kune vatengi muEurope neAmerica musika. Parizvino tinogona kupa hombe muforoma weighting kusvika 90T.
Isu tinokwanisa kugadzira dustbin molds kubva pa40L kusvika 3200L. Tine ruzivo rwakapfuma rwatakawana gore rimwe nerimwe, zviumbwa zvedu zvinogona kuve nekukurumidza kwazvo kutenderera nguva uye hupenyu hwakareba hwevhu. Tinogona kupa kuumbwa mhinduro dzemaindasitiri mabhokisi pamwe hombe zvokurima crates. Nekudzidza zvakadzama nezve maitiro ekushandura shanduro zviri nyore, isu tinobatsira mutengi wedu kuchengetedza chakuvhuvhu uye mutengo wekugadzira. Zvisinei diki, nyore mubato nhovo kana yakachena, yakadzikama nhovo yechikafu, hutsanana chidimbu. Kuumbwa kwedu kunogara kwakavakwa nepfupi kutenderera nguva pamwe nekushanduka kuri nyore. Zvichakadaro, isu tinokwanisa kupa sevhisi kune yakasimba uye yakamira kudhizaina kuongorora.
Hunhu hwakanaka hunovata pakutanga mukugadzirwa kwakanaka.
Nekutsvagisa pamwe nevekunze nevekunze vezera rakanaka, yedu dhizaini dhizaini haisi yakanaka chete pa2D, zvigadzirwa zve3D uye dhizaini dhizaini asi zvakare inounza kukosha kukuru senge "kunoshanda" uye "kureruka" zvakanyanya sezvinobvira kune vatengi vedu.
Chigadzirwa dhizaini timu: isu tinobatsira vatengi muB kudhiza dhizaini uye kugona kuita ongororo. Tiine kana tisina dhizaini, tinogona kugadzira chigadzirwa dhizaini zvinoenderana nezvinodiwa.
CAE timu: kuita tsvagiridzo pamwe nevatengi vedu, senge kurodha kuongorora, kuongorora kwesimba, gasi kana kupupa furo.
Mould dhizaini timu: kuvimba neruzivo rwehupfumi uye software yehunyanzvi, tinogona kukurumidza kupindura kune zvinodiwa nevatengi uye kugadzira dhizaini iri nyore kumuchina, nyore kushandisa, nyore kuita maintainance, uye yakachengeteka kugadzira zvigadzirwa.
■5 akabatana CNC mapoka: DMG yekuGerman, OKUMA naMAKINO vanobva kuJapan, FIDIA yekuItaly. Max.stroke ndeye 4000 × 2000 × 1100mm
■EDM mapoka: DAEHAN-yakapera uye ina-yakapera EDM machining nzvimbo kubva Korea. Max.stroke ndeye 3000 × 2000 × 1500mm
■Azvikuya centre: Kuraki yakatwasuka inofinha uye yekugaya machining nzvimbo kubva kuJapan. Max.cutting udzamu i1100mm.
■CMM mapoka: WENZEL anobva kuGerman, HEXAGON anobva kuSweden uye COORD anobva kuItari. Max.yero yekuyera ndeye 2500 × 3300 × 1500mm.
■Vamwe: SCHENCK chiyero bvunzo michina kubva kuGerman, kuomarara bvunzo michina kubva kuUS, ow-chiyero chekuongorora muchina, mvura & hydraulic yakasanganiswa yekuongorora muchina.
■Kutarisa mapoka: kusvika 500T
■Jekiseni michina: Krauss maffei anobva kuGerman, HAITIAN, YIZUMI. Kufanana kufambisa, magineti kupomba / hydraulic clamping, ine 5-axis robhoti, dhiramu retiki yeMucell, inosvika ku3200T.
Pashure: YeMotokari Chikamu
Zvadaro: Tsvina inogona